192.168.8.1 - Dejiye TP-Link Router
Router-ku waa sanduuq bixiya kombiyuutarro fara badan, taleefannada casriga ah, iyo wax badan oo dheeraad ah si loogu biiro shabakadda isku midka ah. Asal ahaan, router-ka ayaa laga raaciyey halkaas ilaa modem-ka si loogu bixiyo isku xirka internetka qalab kasta oo ku xiran router-ka. Buug-gacmeedkani wuxuu isku dayayaa inuu kaa caawiyo waqtiga ugu horreeya Mudanayaasha TP-Link Router.
Weelka waxaad ku heli kartaa waxyaabo yar:
Aaladda korantada ee korantada
Buug-yaraha tilmaanta qalabka
Fiilo USB ah (wax yar ayaa sameeya)
Dareewal wadis (wax yar samee)
Fiilada shabakada (ee loogu talagay dadka yar yar)
Dejinta TP-Link Router
Haddii aad iibsatay TP-Link Router-kii ugu dambeeyay, markaa qaabeynta routerka & dejinta waa mid aad u fudud. Waxaad si hagar la’aan ah u dejin kartaa router-ka cusub ee TP-Link Wi-Fi & waad isticmaali kartaa.
note: Si aad ugu xirto internetka, router-ku waa inuu ku xirnaadaa jaakada xogta ama modem firfircoon.
Si aad u sameysato TP-Link Router-ka cusub wuxuu u hoggaansamayaa hagahan
Ku wareeji routerka & ku xir kombiyuutarkaaga router-ka adoo adeegsanaya fiilo Ethernet ah.
Markaad isku xidho, booqo biraawsarka webka oo tag www.tplinkwifi.net ama 192.168.0.1
Calan lambarka sirta ah ee soo galitaanka router adigoo qoraya laba jeer. Way kafiican tahay in la haysto oo kaliya - “maamulka”.
Ku dhufo Aynu Bilawno / Galno.
Isla markiiba, raac amarrada on-lineka ah & ku xir shabakadda Internetka & Shabakadda Xargaha leh xulashada Swift Setup.
Ku qor magaca (SSID) magaca Shabakadda Xarig-la'aanta ee berrinka & sidoo kale, deji baaskiil si aad u hubiso shabakadaha Wi-Fi.
Marka, waad joojin kartaa howsha, marka aad kubiirto isku xirka wireless-ka ee SSID oo leh lambarka sirta ah.
Qabanqaabada horumarsan ：
Demi router, modem, iyo PC.
Ku xir modem dekedda WAN ee router TP-Link iyada oo loo marayo fiilada Ethernet; ku xidho kombiyuutarka TP-Link router LAN dekeddiisa siligga Ethernet.
Ku wareeji routerka & kumbuyuutarka marka hore & modemka xiga.
Soo gal bogga maareynta maareynta webka ee router. fadlan tixraac
Qaabee Nooca WAN Connection
Bogga maareynta ee router, riix Network > WAN bogga bidix:
Wax ka beddel Nooca isku xirka WAN iyo 'PPPoE'.
Qor magaca isticmaalaha & furaha PPPoE ee ay bixiso ISP.
Riix Badbaadi si aad u keydiso goobahaaga, mar dambe routerku wuxuu ku xirnaan doonaa internetka muddo kadib.
Sug dhowr ilbiriqsi & hubi dekedda WAN ee ku jirta bogga websaydhka Xaaladda, haddii ay muujiso xoogaa cinwaan IP ah, oo tilmaamaya xiriirka ka dhexeeya Router & Modem-ka ayaa la aasaasay.
Haddii uusan jirin cinwaanka WAN IP & habka internetka uusan jirin, kaliya samee Abaabul Awood sida hoos ku xusan:
1. marka hore Demem-ka DSL dami & routerka & kombiyuutarka dami, oo ha dhig ilaa labo daqiiqo;
2. Hada daar modemka DSL, sug ilaa inta modemku dajinayo, ka dibna u rogo routerka & kombiyuutarkaaga markale.
Iyada oo fiilada Ethernet ay ku xirmaan routerka muhiimka ah ee routerkaaga TP-Link adoo maraya dekeddaha LAN-ka. Dhammaan dekedda LAN-ka ee dheeriga ah ee routerka TP-Link N ayaa hadda siin doona marin u helidda internetka qalabka.
Categories Router Deji Post navigation